Herbaceous forage legume: सबै भन्दा साधारण प्रकार
रूस मा Herbaceous forage legume धेरै embodiments प्रतिनिधित्व। पहिलो सेतो, गुलाबी वा छ रातो क्लोभर। उहाँले उल्लेखनीय खाना गुणस्तर, प्रोटिन मा धनी र सफलतापूर्वक गाई लागि फिड रूपमा प्रयोग गरिएको छ (- होस्ट बोट यसैले नाम) छ।
सबै भन्दा साधारण संस्कृति - यो दुई सय वर्ष को लागि हाम्रो देशमा उब्जाउ गरिन्छ कि रातो क्लोभर छ। संयंत्र नम माटो, जैविक र खनिज मिश्रण, राम्रो तटस्थ वा अलिकति एसिड माटो मा विकास संग fertilized रुचि। गुलाबी विविधता थप भूमि आवश्यक र अलिकति तीतो स्वाद, जीवहरूले भन्दा त झन् खराब छ।
त्यहाँ अन्य बहुमूल्य herbaceous forage legume छन्। यो alfalfa। संस्कृति फिड को उच्च digestibility र दक्षिणी क्षेत्रमा प्रजनन को एक रेकर्ड को एक साधारण दृश्य छ। गर्मी र चिस्यान प्रदान गरेर7mowing (प्रति बारेमा 250 टन सेन) प्रति हेक्टर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पूरक सिंचाई को कमी संग क्षेत्रमा एक सिजन मा प्रति हेक्टर 2-3 mowing बारेमा 90 quintals संकलित गर्न सकिन्छ।
यस्तो चारा बोट legume परिवार, sainfoin जस्तै राम्रो मा chernozem मा बढ्छ वन र steppe। सफलतापूर्वक कागती मा धनी Stony soils मा विकास गर्न सक्छन्, यो एक मह बोट छ। Sainfoin, उत्तर काकेशस मा predominantly विकास आफ्नो जनावर खपत गर्दा क्रप चारा प्रति क्विंटल बारेमा 22 एकाइहरु दिने, खडेरी रहिरहन्छ।
अर्को herbaceous forage legume रोमन पटक देखि ज्ञात र "विक" को रूपमा चिनिन्छ। यो रूस, र बेलारुस केही केन्द्रीय क्षेत्रमा मा, काकेशस उब्जाउ गरिन्छ। को प्राप्त संस्कृति मकै silage, घास र हरियो चारा देखि। उत्तरार्द्ध प्रति क्विंटल वजन फिड को 22 एकाइहरु छन्। एक हेक्टर देखि, कृषि टेक्नीसियन विषय अन्नको 20 centners वा संस्कृति धेरै पशुपालन फार्महरूको मा seveooborotah सहभागी आकर्षक बनाउँछ जो हरियो बोट ठूलो, को 250 centners सम्म जम्मा गर्न सक्छ।
सबैभन्दा unpretentious herbaceous forage legume कहाँ बढ्छ? लचक मामलामा घाँस मटर जान्छ। यसको उच्च चिसो प्रतिरोध (अप माइनस सात डिग्री सेल्सियसमा तापमान सामना गर्न सक्छन्), खडेरी प्रतिरोध soils गर्न undemanding पश्चिमी साइबेरिया गर्न खेती क्षेत्र विस्तार गर्न हामीलाई सक्षम गर्नुहोस्। बढ्दो अवधि (लगभग 112 दिन) प्रति हेक्टर हरियो वा बारेमा 17 यू अन्न मा केन्द्रीय रूस मा यो सम्भव प्राप्त गर्न बारेमा 230 यू बिरुवाहरु बनाउँछ। संस्कृति खुसीसाथ घोडाहरू र भेडा द्वारा खाएको, उनको उपभोग कम सम्भावना गाई।
परिवार फलियां ल्यूपिन को जडिबुटी प्राचीन मिश्रको ज्ञात थियो। यो जनावर र मानिसहरूलाई (सिमी) दुवै बृद्धि गर्न प्रयोग गरिएको थियो। आज यो हरियो मल, साथै एक लागि प्रयोग गरिन्छ फिड क्रप। पहेंलो ल्यूपिन को बाली को एक हेक्टर देखि बोट को हरियो ठूलो को 400 quintals, वा अन्नको लगभग 15 centners सम्म जम्मा गर्न सक्छ। यस मामला मा, बोट कुनै पनि alkaloids समावेश गर्दैन, टी। गर्न। सोभियत संघ मा बीसौँ शताब्दीको मध्य-30 सेकेन्ड मा, नयाँ प्रजातिहरू भेट्न खाद्य सुरक्षा आवश्यकताहरु नस्ल गरिएको छ।
साथै, रूसी संघ र बेलारुस को पश्चिमी क्षेत्रमा गरिब बलौटे loam र बलौटे soils गर्न पूर्ण छाँटकाँट छ जो ornithopus, रूपमा संस्कृति पूरा गर्न सक्छन्। जब प्रति हेक्टर मल पशुधन खुवाउन प्रयोग गरिन्छ जो हरियो ठूलो, को 298 centners सम्म प्राप्त गर्न सकिन्छ। संस्कृति पनि चराई जनावर लागि उत्कृष्ट अवसर प्रदान गर्दछ जो काटन, पछि चाँडै बढ्छ।
फिड थपिएको के हो?
मल: सुविधाहरू काम
घरमा सुँगुर butchering
Maneuverability को गुणक
जब शरद ऋतु स्ट्रबेरी मा transplanted र, तपाईंलाई थाहा?
लागि कृषि उत्पादन स्रोत कोड सबैभन्दा आवश्यक कुरा
कागति संग गाजर जाम: नुस्खा। असामान्य जाम
मानव अधिकार को अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय। न्याय अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय। अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालत
Vadim Zadorozhnyj: जीवनी, फोटो, परिवार। प्रविधि संग्रहालय Vadim Zadorozhnogo ठेगाना, समीक्षा
"Terpinkod" हो। प्रयोगको लागि निर्देशन
Derbent, Dagestan मा आराम। कैस्पियन सागर
जब साइबेरिया मा बन्दागोभी बाली गर्न। साइबेरिया लागि cabbages
सबै ठेगानामा "इल आंगन" मास्को मा
कसरी "Maynkraft" आफ्नो घोडा तालिम, घोडाहरू के हुन् र तिनीहरूलाई के गर्न
Kedrov मा 22 क्लिनिक: रोगी समीक्षा
शक्ति कनेक्टर र कम्प्युटर मा अन्य कनेक्टरों